သင့် ဘဝ ကို မီးေ မာင်း ထိုးပြလိုက်သော ချမ်း သာ ကြွယ်ဝမှု နှင့် အိုဇာ တာ ကောင်းသော လက္ခဏာရှင်… – Shwe Ba
Shwe MM | July 18, 2020 | Knowledge | No Comments
လက္ခဏာကြည့် ပရိသတ်ရဲ့လက်သူကြွယ်အောက် တနင်္ဂနွေဂြိုလ်ခုံနေရာတွင် ကျွန်ုပ်ပြထားသောလေးထောင့်ကွက် အမှတ်အသားလေးဟာ ပီပီသသရှိနေပါက လက္ခဏာပိုင်ရှင်ဟာ ဘယ်လောက်ဆင်းရဲတဲ့သူဖြစ်ပါစေ အိုဇာတာမုချကံကောင်း၍ …..
အသက်ကြီးပိုင်းတွင် မမျော်လင့်သော ငွေကြေး ဥစ္စာများရရှိကာ ထီဆုကြီးများလည်း ကြီးကြီးမားမားပေါက်၍ အ တိတ် ကံပေးပုံမှာလဲ အများနှင့်မတူတမူထူးခြားတတ်ကာဘုန်းကံမြင့်မား၍ အသက်ကြီးပိုင်း တွင်အစိုးရဝန် ထမ်းဖြစ် ပါက ရာထူးအာဏာများလဲ ရုတ်တရတ်ရတတ်သည်။ ပညာဉာဏ်ကြီးမား၍ ဘာသာရေးကိုလဲ အမြဲလိုက် စားတတ် သည်။ ဤ လေးထောင့်ကွက်အမှတ်အသား ထင်ရှားရင်ထင်ရှားသလို ငွေကြေးဥစ္စာကြွယ်ဝ မှုနှင့်ထီပေါက် ကိန်း များ ရ ရှိတတ်သည်။
အသက်ကြီးပိုင်းတွင်၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာကြွယ်ဝချမ်းသာ၍ အိုဇာတာအင်မတန်ကောင်းတတ်သည်၊တရားဘာဝနာကိုဝင် ရောက်ပါကလဲ၊တရားထူးများ လွယ်လွယ်ရရှိတတ်ကြသည်။လက်ဝါးပေါ်မှလေးထောင့်ကွက်များသည်၊ သူ့နေရာနှင့် သူအကျိုးပေးပုံကွာခြားတတ်ကြ၏ လက္ခဏာလမ်းကြောင်းများနဲ့ ပါတ်သက်၍လေ့လာစရာ တွေကလိုက် မ ကုန်နိုင်ပါ ကျွန်ုပ်အားရင်အား သလိုလက္ခဏာကြည့်ပရိသတ်များကို တင်ပြပေးသွားပါမည်။လက္ခဏာ ပညာရပ်သည် လေ့လာ လိုက်စားလေ နက်နဲလေဖြစ်သောပညာရပ်ဖြစ်ပါသည်။
လက်ဖဝါးပေါ် ကလမ်းကြောင်း ကလေးများသည့် သင့်ဘဝရဲ့အနာဂတ် ပစ္စုပန်များဖော်ပြပေးနေသော ၇၅%မြေပုံအ မှတ်အသားဆိုမမှားနိုင်ပါဘူး ။ထိုကြောင့်သင့်ဘဝရဲ့ အနာဂတ်မှာ ပညာရေး၊လူမှုရေး၊စီးပွားရေး၊ကျန်းမာရေး…. အိမ်ထောင်ရေးနှင့်တခြားလူမှု အခက်ခဲများ၊သားသ မီးပညာရေးများကိုကြို တင်သိရှိနိုင်ပြီးဘဝကိုဘယ်လို စီမံဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာကိုသိရအောင် သင့်လက္ခဏာကိုအွန်လိုင်းမှတဆင့်ပေးပို့၍ တွက်ချက်နိုင်ပါ သည်။
အသေးစိတ်တွက်ချက်လိုပါက သင်တို့ ရဲ့ လက်ဖဝါး ပုံစံဘယ်၊ညာတစ်စုံကို ကြည်လင်စွာ ဓာတ်ပုံရိုက်၍ အမည်၊မွေးသက္ကရာဇ်၊မွေးလ၊မွေးရက်နှင့်နေ့နံတို့ကို Viber မှတစ်ဆင့် ပေးပို့၍ စာရင်းယူနိုင်ပါသည်။
၁.၁.၂၀၁၉ ခုနှစ်မှစ၍အွန်လိုင်းတွင် စတင်တွက်ချက်ခဲ့ရာ တနေ့ထက်တနေ့ လူဦးရေစာရင်းပေးဘုံကင်ယူမှု တနေ့လျင်လူ၈၀ကျော်သည်အထိစာရင်းပေးတွက်ချက်လာသည်ဖြစ်ရာ ကျွန်ုပ်၏ကျန်းမာရေးကြောင့်တနေ့လျင်လူ၃၀ကျော်အထိသာတွက်ချက်ပေးနိုင်ပါသည်။
သို့ပါသောကြောင့်တွက်ချက်သော လက္ခဏာကြည့်ပရိသတ် အနေနဲ့ရက်စောင့်ရသည် ကိုစိတ်ရှည်ကြပါရန်နှင့်သင် တို့နှင့်တွက်ချက်သည့်အခါတွင်လည်း ကျွန်ုပ်ဘက်မှစိတ်ရှည်၍အချိန်ကိုအတိကျသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသည်ကို တွက်ဖူးတဲ့ သူတိုင်းသိပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်တုံကင်ပေးနောက် ကျ၍ရက်စောင့်ရသည်ကိုအဓိကမ ထားပဲ ကျွန်ုပ်နှင့်တွက် ချက် ဖို့ကိုသာအဓိကထားပေးကြပါရန်။တိကျမှန်ကန်မှုတွေနဲ့သင့်ဘဝရဲ့ရှေရေးကို ကောင်းခြင်း ဆိုးခြင်းအဖြေများကိုရ၅%သင်သိရှိသွားလိမ့်မယ်။
1998ခုနှစ်တွင်မှန်ကန်မှုကြောင့်လက္ခဏာကြည့်ပရိသတ်၏ရ၅%.ထောက်ခံမှုကိုရရှိထားပြီး၊ထိပ်သီးပုဂ္ဂိုလ်များ၊အရာရှိကြီးများ၊သူဌေးကြီးများ၊အောင်မြင်နေသောအနှပညာရှင်များဆရာတ်ာကြီးများ၏ ထောက်ခံအားပေးမှု လက်မှတ် များ ကိုရရှိထားသောလက္ခဏာဆရာဖြစ်သည်။ မှတ်ချက်။ ။အွန်လိုင်းတွင်လက္ခဏာ တွက်ချက်သူများအား ဉာဏ် ပူဇော်ခကို အခြေခံလူတန်းစားများကအစတွက် ချက်နိုင်ရန်ဉာဏ်ပူဇော်ခကိုအခြေခံမှ စ၍အစားစား သတ်မှတ် ထားပါသည်။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ အောင်မြင်မှုတွင် သူ့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် ဟာငွေရဖို့ကိုအဓိကမ ထားပဲကိုယ်တတ်ကျွမ်းတဲ့ လုပ်ငန်းပေါ် မှာ အလေးထားအနစ်နာ ခံမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာ တစ်နေ့မှာကိုယ့်အိမ်တံခါးပေါက်ကို လာခေါက်ပါလိမ့်မယ်။အဲဒီအချိန်မှာ သင်ဟာငွေနောက်ကိုလိုက်စရာ မလိုတော့ပါဘူး ငွေကသာသင့်နောက် ကိုလိုက်လာလိမ့်မယ် အဲဒါသင့်ရဲ့တတ်မြောက်ထားတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာ ပေးဆပ်မှုအတွက်ရလဒ်ပဲ။
လက္ခဏာဆရာမင်းခန့် (သင့်ဘဝကို မီးမောင်းထိုးပြလိုက်ပြီ) Viber.09694506705
လက်ခဏာကွညျ့ ပရိသတျရဲ့လကျသူကွှယျအောကျ တနင်ျဂနှဂွေိုလျခုံနရောတှငျ ကြှနျုပျပွထားသောလေးထောငျ့ကှကျ အမှတျအသားလေးဟာ ပီပီသသရှိနပေါက လက်ခဏာပိုငျရှငျဟာ ဘယျလောကျဆငျးရဲတဲ့သူဖွဈပါစေ အိုဇာတာမုခကြံကောငျး၍ …..
အသကျကွီးပိုငျးတှငျ မမြျောလငျ့သော ငှကွေေး ဥစ်စာမြားရရှိကာ ထီဆုကွီးမြားလညျး ကွီးကွီးမားမားပေါကျ၍ အ တိတျ ကံပေးပုံမှာလဲ အမြားနှငျ့မတူတမူထူးခွားတတျကာဘုနျးကံမွငျ့မား၍ အသကျကွီးပိုငျး တှငျအစိုးရဝနျ ထမျးဖွဈ ပါက ရာထူးအာဏာမြားလဲ ရုတျတရတျရတတျသညျ။ ပညာဉာဏျကွီးမား၍ ဘာသာရေးကိုလဲ အမွဲလိုကျ စားတတျ သညျ။ ဤ လေးထောငျ့ကှကျအမှတျအသား ထငျရှားရငျထငျရှားသလို ငှကွေေးဥစ်စာကွှယျဝ မှုနှငျ့ထီပေါကျ ကိနျး မြား ရ ရှိတတျသညျ။
အသကျကွီးပိုငျးတှငျ၊ စညျးစိမျဥစ်စာကွှယျဝခမျြးသာ၍ အိုဇာတာအငျမတနျကောငျးတတျသညျ၊တရားဘာဝနာကိုဝငျ ရောကျပါကလဲ၊တရားထူးမြား လှယျလှယျရရှိတတျကွသညျ။လကျဝါးပျေါမှလေးထောငျ့ကှကျမြားသညျ၊ သူ့နရောနှငျ့ သူအကြိုးပေးပုံကှာခွားတတျကွ၏ လက်ခဏာလမျးကွောငျးမြားနဲ့ ပါတျသကျ၍လလေ့ာစရာ တှကေလိုကျ မ ကုနျနိုငျပါ ကြှနျုပျအားရငျအား သလိုလက်ခဏာကွညျ့ပရိသတျမြားကို တငျပွပေးသှားပါမညျ။လက်ခဏာ ပညာရပျသညျ လလေ့ာ လိုကျစားလေ နကျနဲလဖွေဈသောပညာရပျဖွဈပါသညျ။
လကျဖဝါးပျေါ ကလမျးကွောငျး ကလေးမြားသညျ့ သငျ့ဘဝရဲ့အနာဂတျ ပစ်စုပနျမြားဖျောပွပေးနသေော ၇၅%မွပေုံအ မှတျအသားဆိုမမှားနိုငျပါဘူး ။ထိုကွောငျ့သငျ့ဘဝရဲ့ အနာဂတျမှာ ပညာရေး၊လူမှုရေး၊စီးပှားရေး၊ကနျြးမာရေး…. အိမျထောငျရေးနှငျ့တခွားလူမှု အခကျခဲမြား၊သားသ မီးပညာရေးမြားကိုကွို တငျသိရှိနိုငျပွီးဘဝကိုဘယျလို စီမံဆောငျရှကျရမလဲဆိုတာကိုသိရအောငျ သငျ့လက်ခဏာကိုအှနျလိုငျးမှတဆငျ့ပေးပို့၍ တှကျခကျြနိုငျပါ သညျ။
အသေးစိတျတှကျခကျြလိုပါက သငျတို့ ရဲ့ လကျဖဝါး ပုံစံဘယျ၊ညာတဈစုံကို ကွညျလငျစှာ ဓာတျပုံရိုကျ၍ အမညျ၊မှေးသက်ကရာဇျ၊မှေးလ၊မှေးရကျနှငျ့နနေံ့တို့ကို Viber မှတဈဆငျ့ ပေးပို့၍ စာရငျးယူနိုငျပါသညျ။
၁.၁.၂၀၁၉ ခုနှဈမှစ၍အှနျလိုငျးတှငျ စတငျတှကျခကျြခဲ့ရာ တနထေ့ကျတနေ့ လူဦးရစောရငျးပေးဘုံကငျယူမှု တနလေ့ငျြလူ၈ဝကြျောသညျအထိစာရငျးပေးတှကျခကျြလာသညျဖွဈရာ ကြှနျုပျ၏ကနျြးမာရေးကွောငျ့တနလေ့ငျြလူ၃ဝကြျောအထိသာတှကျခကျြပေးနိုငျပါသညျ။
သို့ပါသောကွောငျ့တှကျခကျြသော လက်ခဏာကွညျ့ပရိသတျ အနနေဲ့ရကျစောငျ့ရသညျ ကိုစိတျရှညျကွပါရနျနှငျ့သငျ တို့နှငျ့တှကျခကျြသညျ့အခါတှငျလညျး ကြှနျုပျဘကျမှစိတျရှညျ၍အခြိနျကိုအတိကသြတျမှတျထားခွငျးမရှိသညျကို တှကျဖူးတဲ့ သူတိုငျးသိပါလိမျ့မညျ။ ထို့ကွောငျ့တုံကငျပေးနောကျ ကြ၍ရကျစောငျ့ရသညျကိုအဓိကမ ထားပဲ ကြှနျုပျနှငျ့တှကျ ခကျြ ဖို့ကိုသာအဓိကထားပေးကွပါရနျ။တိကမြှနျကနျမှုတှနေဲ့သငျ့ဘဝရဲ့ရှရေေးကို ကောငျးခွငျး ဆိုးခွငျးအဖွမြေားကိုရ၅%သငျသိရှိသှားလိမျ့မယျ။
1998ခုနှဈတှငျမှနျကနျမှုကွောငျ့လက်ခဏာကွညျ့ပရိသတျ၏ရ၅%.ထောကျခံမှုကိုရရှိထားပွီး၊ထိပျသီးပုဂ်ဂိုလျမြား၊အရာရှိကွီးမြား၊သူဌေးကွီးမြား၊အောငျမွငျနသေောအနှပညာရှငျမြားဆရာတျာကွီးမြား၏ ထောကျခံအားပေးမှု လကျမှတျ မြား ကိုရရှိထားသောလက်ခဏာဆရာဖွဈသညျ။ မှတျခကျြ။ ။အှနျလိုငျးတှငျလက်ခဏာ တှကျခကျြသူမြားအား ဉာဏျ ပူဇျောခကို အခွခေံလူတနျးစားမြားကအစတှကျ ခကျြနိုငျရနျဉာဏျပူဇျောခကိုအခွခေံမှ စ၍အစားစား သတျမှတျ ထားပါသညျ။
လူတဈယောကျရဲ့ အောငျမွငျမှုတှငျ သူ့ရဲ့ လုပျဆောငျခကျြ ဟာငှရေဖို့ကိုအဓိကမ ထားပဲကိုယျတတျကြှမျးတဲ့ လုပျငနျးပျေါ မှာ အလေးထားအနဈနာ ခံမယျဆိုရငျကိုယျရဲ့အောငျမွငျမှုဟာ တဈနမှေ့ာကိုယျ့အိမျတံခါးပေါကျကို လာခေါကျပါလိမျ့မယျ။အဲဒီအခြိနျမှာ သငျဟာငှနေောကျကိုလိုကျစရာ မလိုတော့ပါဘူး ငှကေသာသငျ့နောကျ ကိုလိုကျလာလိမျ့မယျ အဲဒါသငျ့ရဲ့တတျမွောကျထားတဲ့အလုပျပျေါမှာ ပေးဆပျမှုအတှကျရလဒျပဲ။
လက်ခဏာဆရာမငျးခနျ့ (သငျ့ဘဝကို မီးမောငျးထိုးပွလိုကျပွီ) Viber.09694506705